Ndị Uwe Ojii Anambra Ejidela Mmadụ 113 Maka Òtù Nzuzo Na Ịpụnara Mmadụ Ụgbọala N'Ike
Previous Article Ndị Òjì Egbè Abagbuola Onyeisi Ọchịchị Obodo Nimo n'Anambra
Next Article E Jidela Nwa Ahọ Iri Na Atọ Na-Ezu Ohi n'Awka
Ndị uwe ojii na steeti Anambra ejidela mmadụ ruru ótù nàrị na iri na atọ a na-enyo ènyò na ha bụ ndị òtù nzuzo na ndị na-apụnara mmadụ ụgbọala ha n'ike. Onyeisi ndị uwe ojii na steeti ahụ, bụ maazị Rabiu Ladodo mere ka a mara nke a n'okwu ọ gwàrà ndị nta akụkọ oge a na-akpụgharị ndị ahụ, bụ ndị o kwùrù na e jidèrè n'ọtụtụ ebe dị iche iche na steeti ahụ.
O kwuru na mkpocha na nzacha ahụ e sìrì na ya wee nwụchikọọ ndị ahụ bụ nke e mere site n'aka ndị òtù ọrụ nchekwa ahụ pụrụ ichè na-ebu agha megide otu nzúzo, bụ 'Anti-Cult', n'ọrụ ha gàrà n'ime izuụka abụọ.
O mere ka a mara na a kpụpụla mmadụ iri anọ na ise n'ime ha ụlọ ikpe, tọhapụ mmadụ iri atọ na ise aka ha dị ọcha ka ha laba, ebe a ka na-enyòchakwa mmadụ iri atọ na atọ fọrọ afọ. Ọ sị na ihe e nwèkọtara n'aka ndị ahụ gụnyere: ótù nsụnsụ egbè, ogologo égbè asaa mgbọ dị na ha, ọtụtụ anyụike, mma ògè, na akwụkwọ kpọrọ nkụ a na-enyo ènyò na ọ bụ ìgbó.
O kwuru na ụfọdụ n'ime ndị ahụ bụ ndị na-apụnara mmadụ ụgbọala n'ike, bụ ndị a nàpụtara ụgbọala asatọ ha zutere ezute n'aka ha. Ndị ahụ ka ọ kọwara dịka Paul Chukwuezugo gbara ahọ iri anọ na abụọ na onye òtù ya bụ maazị Micheal Obinna, onye a maara dịka Mayor. O kwuru na ihe e nwèkọtara n'aka ndị ahụ bụ ụgbọala asaa, nke gụnyere: ụgbọala Toyota Venza, ụgbọala Lexus 350 atọ, otu ọkwụọtọ ekele eze Toyota Rav 4, Toyota Corolla atọ na ụgbọala Sports Utility Vehicles (SUV).
Ihe ndị ọzọ e nwètara n'aka ha gụnyere otu nsụnsụ égbè na-agba ọnụ iri, otu mma ògè na ekwentị anọ.